Ixesha kunye nabahlobo 49
NGATHI ▼ ︎
IIBRIBHA ▼ ︎
Indoda noMfazi kunye noMntwana
IMason and Symbols
Amaxesha kunye nabahlobo
UKUZE ▼ ︎
Khangela indawo yeZiko leSiseko
Ukukhangela izitolimenti zoMama kunye nabahlobo
Ilungelo lokushicilela, i-1913, nguHW PERCIVAL.
Nceda unike inkcazo yokungafi kwaye uchaze ngokufutshane ukuba ukungafi kungafumaneka njani?
Ukungafiyo ngumbuso apho umntu esazi khona ukuba ungubani na ngalo lonke ilizwe, iimeko kunye notshintsho.
Ukungafi kufuneka kufunyanwe ngokuqonda, ngokusetyenziswa kobukrelekrele. Ukungafi kungafunyanwa yinkolelo engaboniyo kuhlobo oluthile lobomi obungenasiphelo emva kokuba umntu efile, kwaye akukho mntu unokufumana imeko yokungafi ngesipho, ubabalo, ilifa. Ukungafiyo kufuneka kufunyanwe ngokusebenza nzima, ngobukrelekrele.
Ukungafi kufuneka kufunyanwe kwaye kufunyanwe ngaphambi kokuba kusweleke, ngexesha lokuphila komntu emzimbeni womzimba kweli lizwe lomzimba. Emva kokufa akunakufumaneka. Zonke iingqondo ezingazalelanga zizabalazela ukungafi. Ukuba ukungafi akufunyanwa ngaphambi kokuba ufe, umzimba uyafa kwaye nengqondo ibuyele emhlabeni ngomzimba omtsha wenyama, ixesha emva kwexesha de kufumaneke ukungafi.
Indlela yokungafi kukuba umntu ayeke ukuzazisa ngomzimba wakhe wenyama, okanye ngeminqweno kunye neemvakalelo zakhe, ubuntu bakhe. Ufanele azichaze kwinto enesazela solwazi; Oko kukuthi, kunye naye. Xa ecinga ngale nto aze azibonakalise kuyo, ukungafi kubonakala kusondele. Ukuze uphumelele kule nto, umntu kufuneka athathe uluhlu lwezinto kunye nezinto ezenza oko sele ezazi ukuba unazo. Emva kolu luhlu kufuneka ahlole ukuba yintoni enokutshintsha kuye, kwaye yeyiphi esisigxina. Lowo ke uzingisayo, kodwa engagcinanga ixesha kunye nendawo, ngawakhe; yonke enye into yinto yokwexeshana.
Kuya kufumaniseka ukuba imali, imihlaba, iidemokhaya, izinto, isikhundla, udumo kunye nantoni na eyenye yehlabathi elixabise kakhulu, ziphakathi kwezinto ezihamba kancinci, kwaye zincinci okanye alikho xabiso kulowo uzama ukungafi. Izinto ezixabisekileyo azibonakali, ayizizo iimvakalelo.
Kunene Isizathu kunye kunene iingcinga kubomi bemihla ngemihla, kuwo onke amabakala obomi bemihla ngemihla, nokuba uhambo ebomini luthini, zizinto ezibalwayo. Asibobomi obulula obuzisa iziphumo ezikhawulezayo. Ubomi be-hermit, kude nenkathalo kunye nezilingo, ayiboneleli ngeendlela okanye iimeko. Umntu onobunzima, izilingo, izilingo, kodwa uzoyise kwaye uhlala ezilawula kwaye ziyinyani iinjongo zakhe zobukrelekrele zokungafi, kungekudala kwaye kubomi abambalwa afikelele kwinjongo yakhe.
Isimo sengqondo esisebenza kuqala siluncedo kukuba umntu ozifunayo uya kwazi ukwahlukana nomzimba wakhe, eyahlukileyo kubuntu bakhe, iminqweno yakhe, iimvakalelo, iimvakalelo, kunye nolonwabo kunye neentlungu zabo. Kuya kufuneka aziqhekeze kwaye azimele kuyo yonke le nto, nangona kubonakala ngathi ichukumisa isiqu sakhe kwaye ngamanye amaxesha kubonakala ngathi unguye. Isimo sakhe sengqondo kufuneka ukuba, sokuba ungapheli, aphile njengongapheliyo, naphakade, ngaphandle kwemida kunye nokwahlula-hlula kwexesha, okanye uthathele ingqalelo indawo. Le yimeko yokungafi. Kuya kufuneka aqhelane nokukujonga oku njengento yokwenyani. Uya kwandula ke azi .Ukuba intlebendwane ayonelanga, kwaye ukuba unqabile ngayo, akunamsebenzi kwaye ungumntwana.
Ngaba ukuthandwa komntu nokungathandwa kwakhe kuboniswa ngumphefumlo wakhe? Ukuba kunjalo, zibonakaliswa njani? Ukuba akunjalo, luvela phi olu thando kunye nokungathandeki
Ibinzana elithi "umphefumlo womntu" lisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwaye limele izigaba ezininzi zeenxalenye ezingabonakaliyo zento ebizwa ngokuba yindoda. Umphefumlo unokuthetha imeko yakhe yangaphambi kokuba yendalo, okanye isithunzi esingenangqondo emva kokusweleka, okanye imigaqo engabalulekanga ekuyo yonke le nto ebomini. Umphefumlo womntu apha uthathwa njengengqondo-umgaqo wokucinga, ukukhanya komzimba. Ukuthandwa kunye nokungathandwa ngumntu ayizibonakaliso zengqondo yakhe. Ukuthandwa nokungathandeki kubangelwa kukusebenza kwengqondo ngeminqweno.
Xa ingqondo ithathela ingqalelo eminye yeminqweno iyayithanda; Eminye iminqweno ingathandwa yingqondo. Leyo ngqondo yengqondo ecinga ngomnqweno, ukuthanda ukuthanda; olo luhlobo lwengqondo elicinga kude nomnqweno kunye neengqondo, umnqweno ongathandekiyo. Ngale ndlela kuphuhliswa ukuthandwa nokungathandani phakathi kwengqondo kunye nomnqweno. Ukuthandwa kunye nokungathandwa kuvela ngokufana kunye nokungafani kwengqondo kunye nomnqweno. Izihlobo zomntu ezithandwayo nezingathandwayo zizalwa kwaye zidalwe ngaphakathi kuye. Emva koko ubonakalisa izinto azithandayo nangazithandiyo ngaye. Ukuthandwa nokungathandwa okwenziwe kwindoda enye kuya kudala ukuthandwa nokungathandwa kwindoda edibana nayo; kwaye ezo zinto zibangela ezinye izinto ezithandwayo nezingathandwayo kwamanye amadoda abathi ngokufanayo basasaze ukuthanda kwabo nokungathandanga; ukuze umhlaba ugcwele ukuthandwa nokungathandwa. Ngale ndlela kunokuthiwa ilizwe libonisa izinto ezithandwayo nezingathandwayo ngumntu.
Ngaba siyalithanda ihlabathi nezinto ezisehlabathini? Okanye ngaba asibathandi? Kulilize ukuzama ukuyeka ukuthanda okanye ukuthanda. Kulungile ukuba umntu ale ukwala isohlwayo nengqondo yakhe, into ayaziyo ukuba ayilungile. Ke ubhalisa ukungafaneleki. Kulungile ukuba umntu athande kwaye acinge ngento azi ukuba ilungile, ayenze. Ngale ndlela ukuthandwa kwakhe kukuxabisa kunye namandla. Ukuba ukuphatha ukuthanda kunye nokungathandi ngale ndlela naye, abanye baya kuyenza, nabo, kwaye umhlaba uya kutshintsha ngokuthandwa nokungathandwa.
The Word Foundation, Inc. | Abapapashi baka UkuCinga nokuPhelela